Ogaden News Agency (ONA) – Cabdulaahi Cali oo Sweden ka tagay, Shariif Hure oo Norwey ka tagay maxay kala kulmeen socdaalkoodii
Cabdulaahi Cali oo Sweden ka tagay, Shariif Hure oo Norwey ka tagay maxay kala kulmeen socdaalkoodii
Waraka aan ka helayno Ogaadenya gaar ahaan magaalada Wardheer ee xarunta u ah gobolka Doollo ayaa sheegaya in waayahan danbe uu socday olole lagu dhibayay dadka shacabka ah ee reer guuraaga ah. Ololahan ayaa ka socday magaalada Lehelow oo gacan-ku-dhiigle Cabdi Iley uu u sheegay dadka deegaanka in uu dagmo uga dhigayo hadii ay keenaan ciidan, lacag iyo xoola nool.
Arintan ayaa walaac badan ku abuurtay dadka deegaanka kadib markii xoolihii laga soo ururiyay dadweynaha looga isticmaalay si gacan dhaaf ah oo boob aan wax laga waydiinaynin ah. Waxaa kaoo uu walaac badan kala soo darsay hubaynta dhalinyarada kale ee aan ahayn kuwii horey u jiray ee Hawaarinta, oo dadweynaha lagu qasbay inay bixiyaan mushaharka la siinayo, taas oo dadka deegaanku ay is waydiinayeen meesha ay ka baxeen ciidamadii dawladu ugu tala gashay shaqadan ee mushuhaarka lasiin jiray.
Sikastaba ha ahaatee todobaadkii lasoo dhaafay ayuu Cabdi Ubo u sheegay dadkii ugu tagay arimahaa in uusan awood u lahayn in Lehelaw uu dagmo ka dhigo ayadoo buu yidhi Killilkii wax badan oo isbadal ah ay ku yimaadeen. Wuxuuna u raaciyay; “Hase yeeshee waxaan aadayaa xajka marka aan ka soo noqdo iyo xaalada sida ay noqoto ayaan eegaynaa.”
Dadka deegaanka oo arintaas u arkay inay tahay bur bur kuyimid maamulkii maqaar saarka ahaa ayaa ugu danbayntii ka warhelay in Hawaarintii Wardheer lagu guray baabuur loona sii qaaday galbeedka Ogaadeeniya. Gobolka bariga Ogaadeeniya ee Doollo ayaa ka mid ahaa meelihii ay xiliyadii ugu danbeeyay ka dhacayeen dacatiyada iyo xasuuq wadareedka loo gaysanayo shacabka ogaadeeniya.
Inta uusan xasuuqii Qoriile dhicin ayaa waxaa qurbaha ka tagay labada nin ee lagu kala magacaabo Cabdulahi Cali aw-Dubad oo ka tagay wadanka Sweden iyo Shariif Hure Nuur oo ka tagay wadanka Norway. Labadaa nin oo kamid ahaa ururkii burburay ee AL Itixaadkii dhamaadkii sagashameeyadii.
Labadan nin ayaa ka dagay magaalada Jig-jiga halkaasoo ay uga sii gudbeen magaalada Wardheer, waxayna shacabkii ku baabuleen inay la dagaalamaan CWXO. Nimankan oo garab sanaya ciidama gumaysiga iyo Hawaarinta ayaa ku jideeyay shacabka dagan magaalada Lehelaw in la uruuriyo geel, lo’, adhi iyo lacag taasoo ay yidhaahdeen waxaan ku qoraynaa ciidan aanu ku ilaalino deegaanka.
Ugu danbayntii markii ay arkeen adayga dadka shacabka ah iyo wacyiga dadweynaha iyo xaqiiqada ka jirta gobolka ayay ku soo laabteen magaalada Jig jiga halkaasoo ay kula kulmeen Cabdi ubo. Markuu uga waramay xaalada cakiran ee haysata ayay si haleel haleel ah uga soo ambabaxeen Ogaadeeniya ayagoo ku soo laabtay qurbaha. Waxayse wali raadinayaan in ay lacago ka qaadaan dadka iyagoo u wareegay hadda oo leh waxaan idiin haynaa dhul bilaash ah.
Xiligan kala guur ah ee shacabka Ogaadeenya uu kasoo gudbay cabudhiskii iyo cadaadiskii ayaa nasiib wanaag ah inuu Cabdulaahi Cali iyo Shariif Hure uu gabalka u dhacay, waxayse galeen taariikh madaw meesha maanta ay dhagar qabayaashii u soo kala baxsanayaa shacabkoodu sidii uu ku cafin lahaa ayay ayagu cagahooda ku doonteen in aya kharash iyo wakhti ku bixiyaan wixii ay Wayaanaha ka quusteen 18 sano kadib markii dagaal hubaysan ay kula jireen shacabka Ogaadeeniya ee mintidka ah.
GUNO QAATE LITAAAA
AS/ aad baan idiin salamay kaddib waxaan aad uga xumahay in aad war aan sal iyo raad lahayn aad galiseen website kan marka waxan si xushmad kujirto ucodsanayaa in uu ii soo qoro ruuxii qoray maqaalkaas Emailkiisa hadii uu soo sheegi waayo waa in aad kasaartaan, wax kastoo laqoro ama ladhoho lama faafiyo ilaa laxaqiijiyo,fadlan iisoo sheega telfonka ninkii qoray arima kusaabsan, shariif iyo Abdulhi ali jawaab baan idanka sugayaa,